ကလိုစေးထူး: ဒါဖြင့် ဒီလိုလုပ်တာပေါ့
Posted by ကလိုစေးထူး at 11:07 PM
Oct 9, 2008, 1:34:00 PM
ဒါဖြင့် မတရားတာကို ဆက်လက်ဆန့်ကျင်မယ်၊ ဒူးထောက်ဝါဒ လက်ကိုင်စွဲပီး ရသလောက်လေး သနားသလောက်လေး ယူတာပေါ့ ဆိုပီး အဓမ္မ ကိုတော့ အရှုံးပေးစရာ မလိုဘူး။ နည်းဗျူဟာတွေ လမ်းစဉ်တွေ ၀ါဒတွေ အမျိုးအမျိုးကိုင်စွဲကြ ကြံ့ကြံ့ခံတိုက်ပွဲဝင်ကြ။ အချိန်တွေရင်းရမယ်။ နှစ် ၂၀မကလို့ နောက် အနှစ်၂၀လဲ ကြာရင်လဲ မတတ်နိင်ဘူး အဓမ္မ မတရားမှုကိုတော့ အစိုးမိုးမခံဘူး။ ဒါဖြင့် ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြရုံပဲရှိတယ်။ ဒါဖြင့် ဒီလိုပဲ လုပ်ရမှာပဲ။
စာကြွင်း။ ဒီပို့စ်ကို အကြွင်းမဲ့ ထောက်ခံတဲ့အတွက် အစက ကွန်မန့်မပေးတော့ပဲ ခပ်ငြိမ်ငြိမ်ပဲနေခဲ့ရာက၊ ပို့စ်အသစ်က ကွန်မန့်မှာ တစ်ယောက်က ဒီမှာ ကွန်မန့်နဲလှချည်လား လို့ပြောထားတာ တွေ့တာနဲ့ ပြန်လာရေးလိုက်တာပါ။ စကားမစပ် အဲဒီပြောတဲ့ သူကိုယ်တိုင်တော့ ဒီမှာ ကွန်မန့်ပေးမထားပါလား။
Oct 10, 2008, 2:19:00 AM
ဟား ဟား နှစ်ခါမပေးတော့ပဲ တခါထဲ ရေးလိုက်တာလေ။ မပေးချင်ရင် အစကထဲက မပြောပဲနေမှာပေါ့။
Oct 11, 2008, 9:25:00 AM
ပြည်သူ တော်တော် များ များ အကြောက်တရား က ကင်းလွတ်တဲ. နေ. ကတော. နအဖ စစ်ကျွန်အောက်က လွတ်မြောက်မဲ. နေ.ဆိုတာ...
အဲဒီတော....အကြောက်တရား ကင်းအောင် တယောက်က အစ တစ်ရာ အဆုံး လုပ်ကြရမယ်။။။
Oct 12, 2008, 6:38:00 AM
ကိုစေးထူးရေ .. အရင်က ဖတ်သာဖတ်နေတာ မရေးဖြစ်ဘူး ကွန်းမန့် .. ဒီတခါတော့ မောင်ဇက်တို့ ရေးပီဗျို့ .. ဂွတ်တယ်ဗျာ .. အရေးအသားစတိုင်လ် ခွဲထွက် သွားတယ် ..
Oct 15, 2008, 7:21:00 AM